Posted on Okthoba 8, 2018
“Detox” ubelokhu omunye buzzwords yamuva kakhulu eminyakeni yamuva. Kungenzeka ukuthi uye wazama uchungechunge detoxifications Ukudla ne juice zokugeza izinhlelo ukudla ngemva extra amaholide nokuzitika. Noma mhlawumbe waphuza itiye ubuthi emzimbeni ukuqeda ukuvuvukala ngokweqile ngaphambi umcimbi omkhulu (lapho yena uzabe ingubo Friend). Kodwa kuthiwani detoxification ngoba isitho ngobukhulu emzimbeni wakho?
Kungakhathaliseki ukuthi ucabangani mayelana fashion, awukwazi ongaphika ukuthi zikhona izinsuku lapho isikhumba sakho ongasebenzisa ngokukhishwa kobuthi egazini. Ezinye izinsuku isikhumba sethu kuyinto muffled ngaphezulu noma ephukile, ikakhulukazi ngemva amaholide eside, futhi siyazi ukuthi kungenxa yokuthi sasilala ukwakheka kwethu, sidla ukudla ezimbi kakhulu, thina dengwane isikhumba sethu emva kwezinsuku ebhishi, noma, Qha nakanye, konke okungenhla. Uma ezinye izitho zomzimba wakho akusebenzi kahle, kusukela wamathumbu yakho (ukudla kakhulu ukudla okungenamsoco) ebuchosheni bakho (ukucindezeleka kakhulu), kungahle kuvele ku-isikhumba sakho ngoba izimbobo zesikhumba babe avimbekile ngenkathi kuzanywa isinxephezelo nezinye izinhlelo ukuthi ukungasebenzi emzimbeni wakho .
A ngokukhishwa kobuthi egazini ebusweni kusho achithe isonto lonke (noma noma yini uhlelo lwakho ivumela) ukususa konke ukungcola, ubuthi, ezingcolisa futhi ngokusebenzisa amangqamuzana esikhumba somuntu efile ukuvuselela futhi sivuselele isikhumba sakho emuva ukubonakala kwawo okuvamile noma, mhlawumbe, uma detoxifies kahle , kangcono kunalokho owake waba ngaphambi.
Qala nge ebusweni
A ebusweni efanele ukuklina izimbobo zesikhumba kunowenziwa umkhuba wokuthi isikhumba ukunakekelwa evamile. Ziphathe a ebusweni (nge massage ebusweni!) Kungenzeka into okuphumuzayo kunazo uke wayesaphaze ku isikhathi eside, okusho an amazing ukucindezeleka Eliminator ngenkathi nihlanza izimbobo zesikhumba. Qala ngokukhishwa kobuthi egazini lakho njengoba ehlanzekile ngangokunokwenzeka nge ukwelashwa ebusweni ngesikhathi wesikhumba noma spa oluthandayo, noma ukufunda ukwenza siqu spa-level yakho ebusweni ekhaya (ungakhohlwa mayelana massage ebusweni!).
Hlanza kabili ngosuku (indlela ekufanele)
Yokuhlanza kufanele kube umkhuba wansuku zonke, kunjalo, kodwa kungakhathaliseki isimiso sakho ejwayelekile ukunakekelwa kwesikhumba, detoxification kwesikhumba lidinga ukuhlanzwa ekuseni ebusuku. Qaphela isikhumba sakho hlobo lapho ukhetha lapho izinto zokugeza ukusebenzisa. Kubalulekile khumbula ukuthi akudingeki, futhi mhlawumbe akufanele, sebenzisa cleanser efanayo zombili izikhathi nsuku zonke. Uma une isikhumba uya woma, i wezindlu uwoyela ekuseni wezindlu Foam ebusuku kuzahlambuluka, ezithambile kanye amafutha. Uma une isikhumba oily ngaphezulu kanye induna elithandwa, ijeli amanzi ezisekelwe ekuseni nakusihlwa kwakuyozuzisa ukususa zonke ukugcwala kwamanzi.
Hlanza ubuso bakho nge umusi
Ngemva yokuhlanza, eneka isikhumba sakho umusi kubalulekile ukuba sivumele izithako ukungena ezimbotsheni futhi kukhishwe ukungcola ngangokunokwenzeka. Uma ungenayo i-eshaweni umusi, ilula, lula futhi imahhala ukuzenzela okwakho. Letha ebhodweni amanzi ukuze ngamathumba, ke ukudlulisa amanzi endishini. Beka ubuso bakho phezu isitsha futhi beka ithawula phezu kwekhanda lakho ukugxilisa ingqondo umusi ku izimbobo zesikhumba ebusweni imizuzu engaba yishumi.
Yenza udaka buso ukuba umngani wakho omkhulu
Clay noma ubumba amafomula kukhishwe iningi amanyela emkhandweni izingqimba engenhla isikhumba. Alulaze noma iyiphi imaski ngamanzi afudumele bese uyiyeka wedwa kuze kuba soft, hhayi wawusomile. Siye ke efakwe ingqondo yethu ukulishiya buso lize imifantu futhi ubuso bethu Awukwazi ukuhambisa (sonke sike wabuzwa ubuhlungu uma udinga ukuhleka noma ukuzamula nge buso ngodaka ezomile). Kodwa naleli qhinga empeleni bome isikhumba sethu futhi kuyisusa amafutha abalulekile ukuthi kubalulekile ukugcina isikhumba hydrated futhi ehlanzekile. Sebenzisa imaskhi zonke izinsuku ezimbili ngesikhathi sokubhalisa ngokukhishwa kobuthi egazini lakho.
Kahle hydrate futhi uvikele isikhumba sakho
I serums kumele kusetshenziswe kabili ngosuku ekuseni ebusuku, njengoba hhayi kuphela hydrate, kodwa futhi uvumele izithako wena gqoka kubo ukugxila isikhumba sakho, ngokuvumela imiphumela engcono. onkhe Morning kufanele ulandele serums nge amafutha okuthambisa futhi lo muthi (kanye nanoma yimuphi omunye umkhiqizo oluncamelayo isikhumba sakho hlobo), nakusihlwa onkhe kumele lulandelwe amafutha okuthambisa, ukhilimu noma ebusuku imaski (futhi kuncike uhlobo isikhumba). Engeza amafutha ebusweni ukuze isimiso sakho okungenani kabili ngalelo sonto imiphumela engcono (ngisho uma isikhumba oily, amabhaktheriya ayibi ku amafutha ebusweni ilungile futhi musa clog pores). Uma isikhumba sakho esomile, opaque noma ulwazi olubucayi, futhi wengeze ezinye hydration / Ukupholisa ishidi buso.
Phuza amanzi amaningi (namanzi kuphela!)
I-Institute of Medicine uncoma engayitholi amanzi nsuku zonke mayelana 91 awunsi (kule nombolo kuyahlukana ngokuya ocansini, isisindo, njll). Yize lokhu izincomo nsuku zonke ukuze ukhiphe ubuthi emzimbeni wakho futhi uhlale amanzi amaningi, bambalwa kakhulu abantu sikuzuze, futhi ngaphezu kwalokho, basuke ukuphuza iziphuzo dehydrating ezifana ikhofi, ayo okunoshukela kanye notshwala. Lutho neze ngingumenzi fan yokuqeda iyiphi yalezi zigaba ebalulekile empilweni yami. Kodwa uma isikhumba sakho ecela usizo, mhlawumbe ikhefu ketshezi uzokwenza kahle. Okungenani izinsuku zakho ubuthi emzimbeni, ngenkathi ukuhlanza isikhumba sakho kusuka ngaphakathi ngaphandle, ukushintsha ekuseni inkomishi yakho (noma ezintathu) yekhofi moisturize futhi itiye ahlanzekile oluhlaza. Gwema utshwala, ayo okunoshukela kanye nazo zonke ezinye izinto eziwuketshezi, ngaphandle kwamanzi / itiye, futhi benza konke abangakwenza ukuze uthole izincomo zakho nsuku zonke.
Yebo, ngisho detoxification kwesikhumba kungase kudingeke uqaphele ukuthi yini ukudla. Uma ufana nami nithanda Umakharoni noshizi futhi Smoothies, kungcono qiniso elibuhlungu ukuthi musa ukukusiza ubone ukuthi isikhumba sakho libukeka. Ukuze uthole rejuvenation Imininingwane kwesikhumba, kubalulekile ukuzivumelanisa ukudla kwakho kube izimpokophelo ngokuhlanza isikhumba. Yehlisa yobisi yakho ukusetshenziswa, ukudla okuthosiwe nokudla ushukela owenezelwe, okuyizinto wonke ukuthi ikhule ezimbotsheni clog futhi isikhumba, phakathi ubude ngokukhishwa kobuthi egazini lakho. Kunalokho, ukhetha izithelo eziningi kanye nemifino ocebile alkalis ezifana amagonandoda, i-broccoli, Kale, ikhabe and bananas. namaminerali ane-alikhali (ezifana ne-calcium, magnesium potassium) ukugcina isikhumba eqinile (futhi izinwele, amathambo namazinyo, nje ezengeziwe ibhonasi amaphuzu). Kuyakhanya kusuka ngaphakathi ngaphandle nge amafutha enempilo like ukwatapheya namantongomane.
Ukhiye kunoma ngokukhishwa kobuthi egazini ukuba lelisu yini ukujabulele ekuphileni kwakho kwansuku zonke, ukugcina lokubona imiphumela uma ngokukhishwa kobuthi egazini iphelile. Ungase uze ukwazi athembisa isikhumba sakho ukuthi uyohlale ukuthi cha okunamafutha pizza noma margaritas okubabayo, noma ukuthi uyoyisiza yini ukuhambisana facials nsuku zonke futhi evala, kodwa ungakwazi abeke ukunakekelwa nomzamo owengeziwe ku ukunakekelwa kwakho kwansuku zonke kwesikhumba bese wengeza Ukudla ekudleni kwakho ukuthi uzizwa umehluko. Nge izinguquko ezincane efana naleyo, isikhumba sakho ngeke badinga ubuthi emzimbeni ngokuvamile kakhulu!
Lapho unomuzwa wokuthi isikhumba sakho idinga detoxification? Wenzani ukunciphisa nokuqubuka yakho embi?